Global Voices teny Malagasy · 5 Febroary 2019
Tantara tamin'ny 05 Febroary 2019
Malezia05 Febroary 2019
Bangladesh05 Febroary 2019
Shina05 Febroary 2019
Tamin'ny 2 jona, tranonkala maromaro tany ampitan-dranomasina no nakatona, anisan'izany ny twitter, flickr ary youtube. Androany 3 jiona, tranonkala maro ao an-toerana, anisan'izany ny Fanfou (endrika twitter Sinoa) sy ny VeryCD (tranonkala fizarana loharanom-baovao avy amin'ny mpiserasera) no nametraka fanamarihana fanamboarana rafitra milaza fa tsy azo idirana hatramin'ny 6 Jiona ny...
Shina: Mpiserasera nogadraina noho ny “fampielezana tsaho”
Notazonin'ny polisy ao Hubei ilay mpiserasera Xiong Zhongjun noho ny fanadihadiana tao amin'ny aterineto ny mombamomba ilay mpamily fiara nanao lozam-pifamoivoizana. Nanomboka tamin'ny 21 Aogositra ny fitazonana naharitra 10 andro araka ny tatitry ny Xinhua.
Lahatsary: ​​Ahoana ny ataon'ny polisy sy ireo manampahefanan'ny fadintseranana amin'ireo bilaogera rehefa any amin'ny seranam-piaramanidin'i Cairo?
Ejipta05 Febroary 2019
(Marihina fa tamin'ny volana Oktobra 2009 no nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy) Ny 21 Oktobra 2009, nosakanan'ireo mpitandro ny filaminana tao amin'ny seranam-piaramanidin'i Cairo ilay bilaogera Ejiptiana Wael Abbas raha handeha hiverina tany Cairo iny izy. Tamin'ny fotoana roa nandalovany tao amin'ny seranam-piaramanidina dia tsy nandeha niaraka tamin'ny solosainany enti-tanana na ny...